I-Lenovo S5 Pro: amanqaku, iphepha lobugcisa kunye nexabiso | I-Androidsis
Emva kokuthelekiswa okuninzi malunga ILenovo S5 Pro Ezi zinto bezivela kwezi veki zidlulileyo, inkampani yaseTshayina iye yazisa ukuba inike izigqibo ngala marhe. Uluhlu olutsha oluphakathi sele lusemthethweni.
Esi sixhobo sisebenzisa iprosesa ye-Qualcomm 63X ye-Snapdragon, eyibeka ngokucacileyo njenge ifowuni ekumgangatho ophakathi ogqibeleleyo kunye neenkcazo. Ukongeza, yenzelwe ukugqitywa okucociweyo kunye nokuzaliswa ziimpawu ezinomdla, kunye nexabiso elinokhuphiswano kakhulu.
I-Lenovo S5 Pro ixhotywe ngescreen esikwi-6.3-intshi. Oku kubanjwe yimida emxinwa kwaye kufikelela kwisisombululo esigcweleyo se-2.246 × 1.080 pixels (19: 9). Inenotshi evuthelweyo ethe tyaba, apho igcina iisenzi ezimbini zokuziva.
Amandla esiphelo axhaswe yi-octa-core Snapdragon 636, ekwaziyo ukufikelela kumaza aphezulu e-1.8 GHz enkosi kwi-Kryo 260 cores yayo yonke, iyonke ihamba ne-Adreno 509 GPU, 6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yendawo yokugcina yangaphakathi. Yonke into igcinwa iqhuba umbulelo kumthamo we-3.500 mAh webhetri ngenkxaso ye-18-watt yokutshaja ngokukhawuleza.
Icandelo lokufota leselula lenziwe yifayile ye- Ikhamera engasemva kabini ye-20 kunye ne-12 MP resolution kunye ne-sensor yangaphambili ye-20 kunye ne-8 MP. Ikhamera engasemva eyi-12 MP shooter yilensi ebanzi exhasa amatyeli alithoba ubunzulu bentsimi ngexesha lokwenyani kwaye iphinda-phinde ukusondeza okubonakalayo okungalahlekiyo, ngelixa iphambili yekhamera ye-20 MP iphambili ye-sensor yi-Sony kunye ne-8 MP infrared; oku ukulungiselela inkqubo yokubonisa yobuso be-3D yesiphelo.
Ezinye izinto zeLenovo S5 Pro zibandakanya I-Android 8.1 Oreo phantsi kweZUI 5.0, Uhlobo lwe-C lwe-USB kunye nokwandiswa kwememori yangaphakathi enkosi kumatshini wekhadi le-MicroSD.
ISIKHUMBUZO 6.3 "FullHD + IPS LCD 2.246 x 1.080p (19: 9)
ISIKHUMBUZO SANGAPHAKATHI I-64 GB iyandiswa nge-MicroSD
IINKCUKACHA Ngaphambili: kabini i-20 kunye ne-12 MP / Ngasemva: kabini i-20 kunye ne-8 MP
IBATTERI I-3.500 mAh ene-18-watt ekhawulezayo
IIMPAWU ZE-OTRAS Umfundi ongasemva weminwe. Ukuqwalaselwa kobuso. 3.5 mm jack. Uhlobo lwe-C C.
I-Lenovo S5 Pro iya kuthengiswa e-China nge-23 ka-Okthobha ngexabiso elimiselweyo le-1.298 yuan, emalunga nee-euro ezingama-160 kwizinga lotshintshiselwano. Okwangoku, ayaziwa ukuba iya kuthengiswa kweminye imimandla, enje ngeYurophu. Oku kuya kwaziwa kwikamva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » lenovo » Inkqubo entsha yeLenovo S5 Pro: 6.3, FHD + iphaneli, SD636 kunye nokunye